Banyere XUZHOU abụọ yiri mgbaaka igwe CO.LTD - Xuzhou Double Mgbaaka Machinery Co., Ltd.
Ndị otu anyị kpuchitere mpaghara 950000 square.
Imepụta Osisi dị ihe dị ka 50000 square.
Nwee oru zuru oke nke nyocha sayensi, imepụta, ire na ntinye.
Advanced Technology na Nnyocha igwe iji hụ na ngwaahịa kacha mma.
ISO9001: Asambodo 2000.
Xuzhou Double Rings Machines Co., Limited so na Golden Moon Group, ụlọ ọrụ ọkachamara nke mmanụ ọkụ, mmanụ ọkụ, igwe mmiri mmiri, igwe na-agba mmiri, Autoclave ， Power Plant Boiler, Steam Pipe na pipe mmiri mmiri wdg.
O nwere ite mmiri ọkụ, A2 na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na D1 & D2 iru eru nke ndị isi nchịkwa nke Nlekọta Nlekọta, Nnyocha na Kwarantaini, kwadoro na ISO9001: 2000 Quality Management System, ma bụrụkwa otu Class C metering unit.
Iduzi ụkpụrụ dị mma nke "Ọdịmma Ngwaahịa Nke Mbụ, Nlekọta Nleba Anya & Ntinye, Ọrụ Na-eresị Afọ Na-eju Afọ" na ntuziaka arụmọrụ nke "Wulite Onyonyo Ngwaahịa Dị Mma, Nọgide Na-egbo Mkpa Ndị Ahịa", ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ iji nweta ahịa afọ ojuju.